Sida loo qoro iibiyaha ugu fiican: furayaasha lagu guuleysto | Suugaanta Hadda
Markaad ka fekereyso qorista buug, waxaad rabto waa kan, marka aad suuqa dhigto, dad badan baa iibsada, akhri, fikradaada ku dhiibo ... Marka la soo koobo, inay noqoto guul. Si kastaba ha ahaatee, tani waa mid aad u adag in la gaaro. Dhab ahaantii, qaar badan baa u soo baxa nasiib -darro ku dhacday, sababta oo ah waxaa la bilaabay waqtigii ku habboonaa ama waxay lahaayeen aabbaheed ama hooyadii. Taas micnaheedu ma aha inaadan baran karin sida loo qoro iibiyaha ugu fiican, laakiin waa inaad maanka ku haysaa in isla'egtan, nasiibka sidoo kale uu door ka ciyaaro.
Hadda, Sida loo qoro iibiyaha ugu fiican kaas oo lagu fikiro inaad ka tagto shaqadaada caajiska ah oo aad naftaada u hibeyso qorista? Hagaag, ugu horrayn waa inaad ogaataa waxyaabaha saamaynta ku leh tixgelinta buugga iibiyaha ugu fiican, ka dibna waa inaad raacdaa xeelado si aad buuggaaga qoraaga u noqoto mid.
1 Waa maxay iibiyaha ugu fiican
2 Sida loo qoro iibiyaha ugu fiican: xeeladaha ugu fiican
2.1 Noqo asalka
2.2 Waxaad tahay lama arki karo haddii aadan lahayn akhristayaal
2.3 Ka hadal buuggaaga xitaa ka hor intaadan dhammayn
2.4 Iska ilaali isbeddellada, furaha qorista iibiyaha ugu fiican
2.5 Buuggaagu waa meherad
Waa maxay iibiyaha ugu fiican
Ereyga iibiyaha ugu fiican wuxuu tilmaamayaa, haddii aan u turjunno, "iibka ugu fiican." Taasi waa in la yidhaahdo, diirada la saaray dunida suugaanta, waxay noqon lahayd shaqo leh iib iibsi oo weyn ama soo jiita dareenka akhristaha ilaa heer aysan ka tagi karin ilaa dhammaadka oo ay kula taliyaan qof walba.
Astaamahani waa waxa qeexaya waxa noqon lahaa iibiyaha ugu fiican: buug guul noqda, taasi waxay leedahay kumanaan iib ah iyo in qof walba ka hadlo. Tusaalooyinkeeda? Hagaag, Konton Hoos oo Grey ah, Tiirarka Dhulka, It, Da Vinci Code ... Dhammaantood waa la bilaabay oo si lama filaan ah ayaa si xun loogu garaacay, waxaa lagu turjumay luuqado badan, isagoo noqday buuggii ugu iibinta badnaa toddobaadyo, iwm.
Sida loo qoro iibiyaha ugu fiican: xeeladaha ugu fiican
Qoraa kasta wuxuu rabaa in buuggiisu noqdo kan wax iibiya. Ama maadaama ay sidaas ku kasbadaan lacag badan, ama ay dad badani akhriyaan, runtu waxay tahay helidda tilmaantani ma aha wax fudud. Suuragal maaha? Midkood. Laakiin ma jiro qaacido sixir ah oo aan kuu sheegi karno si aad u gaarto.
Waxa aan ku siin karno waa xeelado dhowr ah oo ku anfici doona si loo hubiyo in buuggani leeyahay fursado badan oo lagu gaari karo. La diyaariyey?
Haddii aad rabto inaad qorto iibiyaha ugu fiican, waa inaad Sii akhristayaasha wax aysan weligood akhriyin. Taasi way sii adkaanaysaa, maxaa yeelay ficil ahaan wax walba waa la sameeyay, laakiin waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso sheekada guud ahaan oo aad ka fikirto qiimaha ay u yeelan doonto akhristaha, sababta looga sooci karo buugaag kale.
Tusaale ahaan, haddii ay jiraan buugaag badan oo ka hadlaya xukunka ragga, miyaadan u malayn in mid ka mid ah xukunka dumarku soo jiidan doono dareenka?
Waxaad tahay lama arki karo haddii aadan lahayn akhristayaal
Akhristeyaashu waa qayb aad muhiim ugu ah qoraaga, si aad u badan si ay ugu baahdaan buugaag la iibiyo oo loo akhriyo. Dhagaystayaal la'aan, waxba ma aha. Iyo tan leh shabakadaha bulshada ma aha wax adag in la gaaro.
Hadafkaaga kiiskan waa abuuro bulsho raacsan, oo ah dadka aad ka qayb qaadato, inaad xisaabta ku darsato oo ay ka warqabaan waxaad samayso iyo waxaad hesho. Sida iska cad, ma heli doontid hal maalin, ma aha laba ama saddex. Ma aha bilo gudahood. Waxay qaadan kartaa sanado in sidaas la sameeyo. Oo waa inaad noqotaa mid joogto ah, noqo mid hufan (maxaa yeelay tan waxaa si isa soo taraysa looga dalbanayaa qorayaasha, iwm).
Marka, haddii aad xishoonayso ama aadan jeclayn in lagu qariyo asturnaantaada, taas waad iska dhaafi kartaa haddii aad rabto inaad ku guuleysato oo aad qorto iibiyaha ugu fiican.
Ka hadal buuggaaga xitaa ka hor intaadan dhammayn
Kani waa seef laba af leh sidaa darteed waa inaad aad uga taxaddartaa. Waxay ku saabsan tahay in la siiyo kuwa raacsan buraashyo ku saabsan waxaad ka shaqeyneyso. Si kale haddii loo dhigo, kor u qaadista buugga xitaa marka uusan weli dhammaan.
El yoolku waa in la abuuro rajoAkhristayaashu waxay rabaan inay sida ugu dhaqsaha badan u akhriyaan, inay jaceyl u qaadaan ma aha oo keliya buugga, laakiin habka abuurista ee la fuliyo.
Oo maxaan u nidhaahnaa waa seef laba af leh? Hagaag, maxaa yeelay tartankaagu sidoo kale wuu jiraa, iyo fikraddaas asalka ah ee aad qabatay, haddii aadan ka taxadirin waxaad dhahdo (oo aad ka tagto luqadda) way koobi karaan.
Markaa ka digtoonow waxaad muujinayso.
Iska ilaali isbeddellada, furaha qorista iibiyaha ugu fiican
Markaad qoraysid iibiyaha ugu fiican, waa inaad maskaxda ku haysaa taas waxaad heli doontaa fursad wanaagsan oo aad ku guulaysato haddii aad qaadato wax danaynaya dad badan, Miyaadan u malayn Tusaale ahaan, Wareysiga Vampire -gu wuxuu ahaa mid guuleystay maxaa yeelay vampires -ka, markii buuggu soo baxay, ayaa danaynayey. Waa run in markii dambe uu jiray kor u kac, laakiin buuggaas, asalnimadiisa darteed, ayaa suurageliyey tan.
Waa hagaag, waa inaad sidaas oo kale samaysaa, waa inaad dareentaa agagaarkaaga si aad u ogaato waxa dadka xiiseeya, waxay rabaan inay akhriyaan. Oo sidee baad taas ku helaysaa? Hagaag, waad iska hubin kartaa liisaska iibiyaasha ugu fiican, sahamin ka dhex sameyn kartaa kuwa raacsan, ama ka digtoonow arrimaha dhaqanka iyo suugaanta si aad u ogaato waxa hadda socda (laakiin sidoo kale midka mustaqbalka, maadaama qoritaanka buug aan habeen lagu qaban. berri, ka yar haddii aad rabto iibiyaha ugu fiican).
Buuggaagu waa meherad
Waxaa wanaagsan inaad u malayso in buuggu yahay hanti, inaad bixisay wax kasta oo aad awooddo si aad ugu dadaasho waxa aad rabto inay guulaystaan. Laakiin waligaa ha ilaawin inay tahay meherad. Taasi micneheedu waa maxay? Waa hagaag, waa inaad ka fekertaa madaxa. Shirkad kastaa waxay bilawdaa inay soo saarto badeecado iyadoon si dhab ah loo ogeyn inay iibinayso iyo in kale. Adiguna sidaas oo kale ayaa kugu dhacda.
Waayo, lahaanshaha istaraatijiyad aad bay muhiim u tahay. Khubaradu waxay ku talinayaan inay ugu yaraan lix hore tahay. Taasi waa, waxaad bilowdaa inaad ka fikirto wax kasta oo aad u baahan doonto, kor u qaadid, faafin, iwm. leh waqti badan.
Runtii laguma qaadi karo dareen iyo dhalanteed inaad geliso qoraalkaaga, waa inaad u malaysaa inay tahay shirkad oo aad leedahay madax qabow si aad u gaarto hadafkaas ah qorista iibiyaha ugu fiican.
Kahor, inta lagu jiro iyo kadib. Had iyo jeer. Ha u oggolaan in buugaagtaagu ay ku dhacaan illowsho sababta oo ah runtii iibiyaha ugu fiican micnaheedu maahan inay tahay inuu dhowaan noqdo, laakiin taasi, daqiiqad la siiyay, waxay soo jiidataa fiiro gaar ah oo waxay bilaabataa inay iibiso.
Tani waa sababta kor u qaadistu muhiim u tahay. Xaalado badanna waxay ku tusinaysaa dib -u -dhac dhaqaale oo ah qaab buugaag lacag la'aan ah (warqad iyo dijitaal) si dadku dib kuugu eegaan, kaagala hadlaan warbaahinta, iwm. Waxa ugu fiican kiiskan waa inaad u qoondeysaa miisaaniyad ku saleysan suurtagalnimadaada.
Waxaas oo dhan kuma xaqiijin karno guusha markaad qorayso iibiyaha ugu fiican. Laakiin waxaad u dhawdahay inaad gaadho. Miyaad haysaa talo kale oo aad naga tagto?
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Qorayaasha » Sida loo qoro iibiyaha ugu fiican